Sawiro qarsoon iyo muuqaalada Samsung Galaxy Watch Firfircoon | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Noticias, Smartwatch
Samsung ma joojiso soo saarista wararka toddobaadyadii la soo dhaafay. Marka lagu daro kunka iyo hal daadin ee ku saabsan sii kordheysa sii kordheysa Samsung Galaxy S10, shalay waxaan ogaanay suurtagalnimada in Galaxy Buds sidoo kale imaan doono. Haddayna intaas ku filnayn, maanta mar kale Samsung ayaa warka ku soo noqotay shey kale oo shirkadda ka mid ah oo iftiinka arki kara si ka dhakhso badan sidii la filayay.
Markan waxay ku saabsan tahay nooca cusub ee smartwatch ee Rafaa Kuuriya. Waad ku mahadsan tahay daadinta qaarkood waxaan awoodnay inaan aragno sida ay ahaan doonto waxa loogu yeero Samsung Galaxy Watch Firfircoon. Intaa waxaa dheer, xogta iyo astaamaha farsamada ayaa sidoo kale dhacay, maadaama aysan si kale noqon karin, kordhinta rajada dhacdada Samsung ee soo socota.
Active-ka Samsung Galaxy Watch wuxuu yeelan doonaa ciyaar-ciyaar
In kasta oo smartwatch-ku yahay weara waxtar u leh isticmaale kasta. Waa runtaa qaybta isboortiga waxay ka heshaa saamiga isticmaalayaasha mahadsanid tirada codsiyada gaarka ah ee aan heli karno. Qiyaasaha garaaca wadnaha, suurtogalnimada duubista dariiqyada, tababbarka dabagalka, tusaale ahaan, u rog smartwatches qalab ku habboon cayaaraha wax soo saar badan.
Samsung, oo ka warqabta «baahidan», ayaa bixin doonta qalab leh hanuun aad u cad oo dhaqdhaqaaqa jirka ah. Laakiin way samayn doontaa iyada oo aan dhinac looga tagin a naqshad soo jiidasho leh, oo lagu xisaabtamo waxtarka casriga ah. Maaha wax aan micno lahayn, way yeelan doontaa Tiknoolajiyada 4G, NFC, LTE iyo afhayeenka. Waxay sidoo kale ka gudubtay cabirkeeda shaashadda, taas oo noqon doonta 1,3 inji iyadoo lagu xallinayo 360 x ppm X XUMAY. Kordhinta shaashadda oo laga yaabo inay gaabiso marka loo eego isbeddelka kordhinta cabbirka shaashadda smartwatch.
Wixii ku saabsan waxa aan ka heli karno gudaha waxaan sidoo kale kuu sheegi karnaa in Samsung ay doorteen Exynos 9110 processor. Sidoo kale waa suurtagal, sida moodelkan hadda jira, inuu ku yimaado laba cabbir oo kala duwan. Mana cadda wali awoodda uu batterigaagu ku yeelan doono. In ka badan xog ku filan si loo soo saaro rajo badan oo ku saabsan dhacdada Febraayo 20. Miyaan la kulmi doonnaa isla maalintaas Samsung Galaxy S10, headphones-ka Galaxy Buds iyo Galaxy Watch cusub oo firfircoon?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sawirro sifeysan iyo astaamaha Samsung Galaxy Watch Firfircoon
Waxaad hadda isticmaali kartaa VPN bilaash ah oo biraawsarka Opera uu nagu siin doono cusbooneysiintiisa soo socda